Ivotoerana fanampiana | Zeevou
Zeevou Know no hevi-dehibe ho an'ny lahatsoratra fanampiana rehetra, horonan-tsary fampiofanana ary FAQ izay hanampy anao hampiasa tsara ny endrikay rehetra. Na manomboka ianao ary te hanaraka ny torolàlana fanamboarana tsikelikely anao na mpampiasa tranainy te hahalala bebe kokoa momba ny fiasa vaovao, ity no toerana hanombohana mitady.
Izahay eto dia hanohana anao isaky ny mandeha.
Torolàlana fananganana tsikelikely sy topy maso amin'ny antsipiriany momba ny fampiasana faritra maro ao amin'ny rafitra.
Vakio ny valin'ny fanontanianay matetika, na mametraha fanontanianao manokana.
Ho an'ireo mianatra maso dia manangona horonantsary mampiofana be dia be koa izahay.
Midira amin'ny Hetsika
Tongava anjara mavitrika amin'ny fianakavian'i Zeevou amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ny fiarahamonin-tserasera manerantany. Mizarà ny ianaranao, ny tamba-jotra, na mangataha fanampiana ho an'ny mpiara-miasa aminao.
Midira amin'ny vondrona WhatsApp
Mahazoa fanambaràna tena izy amin'ny ekipanay.
Lazao hoe Facebook
Manomeza valiny mitohy momba ny hoavin'i Zeevou.
Mifandraisa amin'ny Airbnb
Rohy mankany Stripe
Manondrana rohy iCal
Rohy mankany Elavon
Fampiharana finday Mobile App
Ampidiro ao amin'ny tranokalanao HTML i Zeevou iFrame
Ny drafitra sy ny isa isaky ny alina / isan-kerinandro / isam-bolana
Mifandraisa amin'ny HomeAway / Vrbo
Mila fanampiana fanampiny ve ianao?
Ho an'ny mpiaro sy ny evanjelista, ny ekipantsika mpiara-miasa mahomby dia misy 7 andro isan-kerinandro. Raha tsy nahita ny valin'ny fanontanianao tamin'ny alàlanay loharanon-karena etsy ambony ianao dia aza misalasala manangana tanana na mailaka amin'ny success@zeevou.com.
Mpitantana fahombiazan'ny mpiara-miasa
Raha Patron ianao dia notendrena ho Mpiara-miasa Mahomby amin'ny Partner rehefa misoratra anarana. Ho eo akaikin'ny mailaka na amin'ny alalàn'ny WhatsApp foana ny Mpitantana fahombiazanao amin'ny mpiara-miasa, koa aza misalasala manatona azy ireo an-tsoratra na amin'ny fandaminana antso an-tsary